Miyaad Laheli Kartaa Khibrad Maskaxeed Xashiishka? • Dawooyinka Inc.eu
Ma ku lahaan kartaa khibrad maskaxeed xashiishka?
Xashiishadda Cannabis-ka ayaa ah warshad la yaab leh oo isku dhafan oo cilmi-baarayaashu wali isku dayayaan inay ogaadaan. Hadda waxay yiraahdaan waxaa jira curiye khibrad maskaxeed u leh cunitaanka geedka, laakiin iyagu si buuxda uma hubo sida iyo sababta ay taasi u dhacdo.
Warshadu waxay leedahay in ka badan 60 xeryahooda cannabinoid (oo ay ku jiraan CBGA, ama cannabigerolic acid; THCA, ama tetrahydrocannabinoleic acid), qaar leh saameyn lid ku ah, oo xitaa xitaa isdhaxgalka oo dhan lama fahmin. Natiijo ahaan, isticmaalka xashiishku wuxuu u saameeyaa dadka siyaabo kala duwan, iyadoo kuxiran isdhexgalkaan (iyo gaar ahaan awoodda maadada THC), oo ay weheliso hiddo-wadaha iyo astaamaha shakhsiyadeed ee macaamilka.
Sida kafeega, xashiishadda waa daroogo nafsi ah, oo macnaheedu yahay inay saameyn ku leedahay garashada, miyirka, niyadda iyo shucuurta. Sababtoo ah waxay saameyn ku yeelaneysaa qeybahaas nidaamka neerfaha, waxay kicinkartaa habab cusub oo feker ah oo u dhigma saameynta LSD - in kastoo ay aad u hooseyso.
Qaar badan oo ka mid ah dadka isticmaala xashiishka waxay leeyihiin sheeko ku saabsan qof isku dayay xashiishad markii ugu horreysay oo macno ahaan u maleeyay inay waalanayaan. Waxay arkeen waxyaabo, waxay gaareen walxaha dul sabeynaya ee aan meesha oollin, way wareereen waxayna bilaabeen matag - dhammaantood hal ama labo tallaal oo wadajir ah ka dib.
Haa, waxay ku mashquulsanaayeen xashiishad.
Marka qofku cuno xashiishadda, waxay la falgashaa dareeraha neerfaha gudbiya maskaxda ee abuura saamaynta (inta badan wacan). Laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo iyada ah, maaddaama neurotransmitter-ka uu la falgalayo nidaamyada kale ee neurotransmitter-ka ee maskaxda, taasoo ka dhalaneysa saameyn aan dawooyin lahayn oo daawo ah, daraasad laga bilaabo 2012, oo lagu daabacay joornaalka Horumarinta Daaweynta Cilmu-nafsiga.
Marijuana badankood ayaa loo heli karaa labadaba dawooyinka iyo isticmaalka madadaalada waxay ka kooban yihiin isku-dar ah THC iyo CBD. Khibradda maskaxeed waxay umuuqataa mid xiriir la leh THC.
Baarayaasha waxay ogaatay in THC ay sababtay astaamaha dhimirka ee ku-meel-gaadhka ah waxayna kordhisay heerarka walaaca macaamiisha ee walwalka, sakhradda iyo suuxdinta, halka CBD aysan saameyn weyn ku yeelan dabeecadahaas.
Hallucinations ayaa suurtagal ah xashiishad awgeed
Daraasad 2018 ah oo lagu daabacay joornaalka Cilmibaarista Cannabis iyo Cannabinoid, ayaa soo warisay in xashiishad ahaan dhaqan ahaan loo kala saaray inay tahay hallucinogen, laakiin saameynta xasaasiga ah ee xashiishka guud ahaan kuma jiraan saamaynta hallucinogenic.
"Warbixinnada Empirical ee saameynta hallucinogenic-ka ee ay soo saaraan xashiishadda ee goobaha la kontoroolo, gaar ahaan kuwa mutadawiciinta ah ee caafimaadka wax ku baranaya, waa naadir waxayna badanaa dhacaan ka dib markii la nadiifiyey THC halkii ay ka ahaan lahayd dhir dhan oo xashiish ah."
Daraasadu waxay sii waday inay ka hadasho kiiska nin 30 jir ah oo caafimaad qabay oo maqal iyo muuqaal muuqaal ah ka helay daraasad shaybaar la kantaroolay ka dib markii la nuugay xashiishad uumi baxday oo ay ku jirto 25 miligram oo THC ah. "Safarku" wuxuu qaatay ku dhowaad 90 daqiiqo, tabarucehuna "shaqadiisu waa itaal darray".
Khibradda hallucinatory ee kiiskan ayaa ka duwaneyd saameynta maskaxiyan caadiga ah sida LSD iyo psilocybin, sida laga soo xigtay natiijooyinka daraasadda, oo soo jeedinaysa in saameynta hallucinogenic ee xashiishadda ay yeelan karto farsamo dawooyin u gaar ah oo ficil ah.
U doodayaasha kale, sida qoraaga Steven Gray, waxay ku tilmaamaan xashiishka inuu yahay "isbahaysi ruuxi ah" oo abuuri kara "ego kala-tagid," taas oo ah saamaynta ugu weyn ee cilmu-nafsiga oo gacan ka geysata dareenka nabada iyo lahaanshaha. Wuxuu hogaamiyaa kulamada fekerka xashiishka si loo baaro xiriirkaas.
Qaar ka mid ah dadka isticmaala xashiishka waxay yiraahdaan LSD waxay la mid tahay "weed times a million". Macaamiisha ayaa soo sheegaya jawaab dheeraad ah oo 'dhimir' ah oo ku aaddan cabitaanka ubaxa noocyo gaar ah oo guud ahaan ka sarreeya THCqiyamka (sida Amnesia Haze, Headband, Durban Poison), laakiin xitaa intaas in ka sii badan oo leh uruurinta iyo cunnada la cuni karo oo leh 70 -90 boqolkiiba THC maadooyinka (saliidaha, sonkorta, xabagta nool, wax).
Khibradaha maskaxda iyo daaweynta LSD, xashiishka iyo psilocybin
Markii ay sii kordhayeen warshadaha xashiishku isla markaana ay u fududaan karaan bilowga, dadka cunaya wax soo saarka la cuni karo inta badan waxay cunaan wax aad uga badan inta la soo jeediyay, taasoo horseedaysa khibradaha "safarka" iyo booqashada qolalka gurmadka. Tani waxay horseedday talo guud oo ka timaadda kuwa sameeya xashiishadda: hoos u dhac (heer THC), tartiib u kac (cun ​​kaliya inta la soo jeediyey).
Marka waxaa ku kala duwan khibrada u dhaxeysa LSD iyo xashiishad, oo labadaba waxaa loogu yeeri karaa maskaxda. Laakiin waxaa jira waxbadan oo kafiican muddadaas.
"Ereyga 'maskaxiyan' laftiisa wax shuqul ah kuma lahan kiimikada qaab dhismeedka," ayuu yidhi Brad Burge, agaasimaha isgaarsiinta istiraatiijiyadeed ee Ururka Daraasaadka Cilmiga Maskaxda (MAPS) ee fadhigeedu yahay Santa Cruz (maps) maqaal ay ku qoreen boggooda. Marka laga hadlayo daawooyinka maskaxda, "badankood wax yar ama waxba kuma laha kiimikada," ayuu qoray. Waxa ay ka wada siman yihiin waa awooddooda ah inay "soo saaraan waxyaabaha maskaxda ku jira," ha noqoto fikradaha miyir-qabka ama xusuusta naxdinta leh ee la cabudhiyay, ayuu qoray.
In kasta oo xashiishadda loo isticmaali karo siyaabo la xiriira, sida xoojinta dhaqanka fekerka ama kicinta hal-abuurka, Burge wuxuu qoray in geedka sida caadiga ah loo isticmaalo qaab la mid ah aalkolada ama nikotiinka: wuxuu “dajiyaa astaamaha dadka ay la kulmaan waqtigaas. in la helo ".
Farqiga kale ee muhiimka ah ee u dhexeeya xashiishadda iyo cilmu-nafsiga waa habka loogu isticmaalo daaweynta. In kasta oo psilocybin, kiimikada ku jirta boqoshaada sixirka, loo isticmaalo in lagu xoojiyo daaweynta, maahan daaweynta lafteeda. "Ujeeddadu waa in lagu xidido dhibaatooyinka dadka," ayuu qoray Burge. Cannabis, dhinaca kale, badanaa waxay daaweyneysaa astaamaha.
Marka xashiishku wuxuu noqon karaa mid khibrad u leh ku raaxeysiga, waxay kuxirantahay qeexitaankaaga. Laakiin sida waxyaabo badan oo ku saabsan sida xashiishku ugu shaqeeyo bini'aadamka nidaamka endocannabinoid - kaas oo ku lug leh tiro sii kordheysa oo shaqooyin jir ahaaneed ah, labadaba habdhisyada neerfaha iyo durugsan iyo xubnaha durugsan - xeerbeegtida ayaa wali socota.
Ilaha waxaa ka mid ah FreshToast (EN), PotGuide (EN), RollingStone (EN)
Cannabis loogu talagalay dareenka dhabta ah ee Zwitserleven. Dhawaan dhakhaatiirta Switzerland ayaa loo ogolaan doonaa inay daawo u qoraan xashiishadda. Tani…